musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Air China inotangisa yakananga Beijing-Copenhagen nzira
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • Denmark Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Kutevera kutanga kwepamutemo kwe "China-Denmark Gore reKushanya", vashanyi veChinese vari kuwedzera kufara nezvekuenda kuDenmark.
Air China Limited (Air China) ichatanga nendege dzisingamire pakati peBeijing neCopenhagen kubva Chivabvu 30, 2018. Kana nzira nyowani yatanga, vafambi vachakwanisa kusvika zvakanaka murungano rwaAndersen senge ngano dzehushe Kingdom mumaawa gumi.
Copenhagen ndiro guta guru reDenmark, uye rakazadzwa nengano-isina mhosva uye ine hupenyu, hunoshamisira. Kutevera kutanga kwepamutemo kwe "China-Denmark Year Yekushanya", vashanyi veChinese vari kuwedzera kufara nezvekufamba kuenda kuDenmark, nevashanyi 260,000 vanoshanyira nyika muna 2017. Ichitevera kuvhurwa kwayo, nzira yakananga yeBeijing-Copenhagen ichave yekuwedzera yakasimba kuenda kunzira yeBeijing-Stockholm, ichienderera mberi nekuvandudza netiweki yeAir China yekuNorth Europe. Kana nzira yatanga, vafambi vemumba vachakwanisa kunakidzwa nekufamba muNorth Europe nekubhururuka kuenda kunzvimbo mbiri, Copenhagen neStockholm. Vapfuuri vanobva kuDenmark neSweden vanozokwanisawo kunakidzwa neawa rinokwana zana nemakumi mana nemana kuburikidza nekufamba pachena muBeijing pavanenge vachienda kune imwe nyika yechitatu.
Kwemakore mazhinji, Air China yanga ichigadzira nzira yepasirese nzira neBeijing senhare yayo. Mambure emigwagwa anopararira pasirese, achifukidza makondinendi matanhatu. Kuwedzeredzwa kweiyi isingamire nzira pakati peBeijing neCopenhagen ndiko kusimudzira kwechirongwa cheAir China chekushandura Beijing kuita nhandare yendege ine mukana wepasirese wepasi rose, uye kugadzirisa kufukidzwa kwenetwork muEurope. Air China inopa kwakakura kusarudzwa kwenzira pakati peChina neEurope. Basa idzva reBeijing -Copenhagen richaunza huwandu hwenzira kusvika makumi maviri neshanu, pamwe nekupihwa kwendege mazana matatu pasvondo kuenda kunzvimbo huru makumi maviri dzekuEurope, kusanganisira London, Paris, Frankfurt, Munich, Vienna, Roma, Moscow, Barcelona, ​​Madrid, Zurich uye Stockholm, ese anoshandirwa nendege-yemuviri ndege.
Iyo Beijing-Copenhagen nzira nhamba ndeye CA877 / 8 uye ine ina ndege nhambo pasvondo, yakarongerwa Muvhuro, Chitatu, Chishanu neSvondo. Ndege inobuda inoenda Beijing na02: 55 uye inosvika kuCopenhagen na06: 45; Ndege inopinda inoenda kuCopenhagen na13: 15 uye inosvika muBeijing na04: 10 (nguva dzese ndedzekuno). Ndege dzese dzinoshandisa iyo Airbus 330-200.